အနန်းကီ (ဂြိုဟ်ရံလ) - ဝီကီပီးဒီးယား
အနန်းကီသည် ဂျူပီတာဂြိုဟ်၏ retrograde နည်းဖြင့် လည်ပတ်သော ပုံစံမမှန် ဂြိုဟ်ရံလတစ်စင်းဖြစ်ပြီး ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် Seth Barnes Nicholson ဆိုသူက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အနန်းကီဟူသော လက်ရှိအမည်ကို ၁၉၇၅ ခုနှစ်မတိုင်ခင်ထိ မရရှိခဲ့ပေ။ ယင်းမတိုင်ခင်က Jupiter XII ဟုသာ သိရှိခဲ့သည်။ အရောင်မှာ မြင်နိုင်သောအလင်းထဲတွင် အနီနုရောင်ဖြစ်ပြီး ဂျူပီတာ၏ များစွာသော ဂြိုဟ်ရံလများထဲမှ အနန်းကီ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သည်။
၆၁၀.၄၅ ရက် (၁.၆၈၀ နှစ်)
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ Jacobson, R. A. (2000). "The Orbits of Outer Jovian Satellites". Astronomical Journal 120 (5): 2679–2686. doi:10.1086/316817. Bibcode: 2000AJ....120.2679J.
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ Sheppard, S. S., Jewitt, D. C., Porco, C.; Jupiter's Outer Satellites and Trojans Archived 2007-06-14 at the Wayback Machine., in Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere, edited by Fran Bagenal, Timothy E. Dowling, William B. McKinnon, Cambridge Planetary Science, Vol. 1, Cambridge, UK: Cambridge University Press, ISBN 0-521-81808-7, 2004, pp. 263-280
↑ Nicholson, S. B. (1951). "An unidentified object near Jupiter, probablyanew satellite". Publications of the Astronomical Society of the Pacific 63 (375): 297–299. doi:10.1086/126402. Bibcode: 1951PASP...63..297N.
↑ Nicholson, S.B. (April 1939). "S. B. Nicholson declines to name the satellites of Jupiter he has discovered". Publications of the Astronomical Society of the Pacific 51 (300): 85–94. doi:10.1086/125010. Bibcode: 1939PASP...51...85N.
↑ Marsden, B. G. (7 October 1974). "Satellites of Jupiter". IAU Circular 2846.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အနန်းကီ_(ဂြိုဟ်ရံလ)&oldid=438723" မှ ရယူရန်
၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၆:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၆:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။